Emsebenzini - Isikhungo se-EcoTechnology
Gcina Amandla Nokunciphisa Ukusingathwa
Thuthukisa Ukusebenza Kwebhizinisi
Amabhizinisi nezikhungo yonke indawo ziyahlomula ngokwenza ngcono ukusebenza kwezemvelo kanye nomongo wazo. Izinzuzo zihlanganisa ukusiza imvelo, ukunciphisa izindleko, ukuheha amakhasimende, nokukhuthaza abasebenzi. ICentre for EcoTechnology isebenza namabhizinisi, okungenzi nzuzo, izibhedlela, amapulazi, amakolishi namanyuvesi, izikole, nezinye izinhlangano ukwenza ngcono ukusebenza kwazo ngokusebenzisa amandla kagesi, amandla avuselelekayo, nokunciphisa imfucuza. Singasiza ekuboneni amathuba amakhulu wokonga izindleko ngenkathi sithuthukisa ukusebenza kwemvelo. Sisiza nezinhlangano ukuthi zenze futhi zisebenzise izinhlelo ukufeza izinhloso zazo.